UYAKHA NJANI IISHELUFA ZOKUHAMBA NGOKUKHAWULEZA ZE-DIY - IIPROJEKTHI ZASEKHAYA
Uyenza njani iShelufu yokuDada ngokukhawuleza ngeZibiyeli ezingabonakaliyo
Ngelixa iishelufu zesiko ngokuqinisekileyo zinendawo emakhaya (molo, iishelfu zeencwadi!), Iishelufa ezidadayo zilungele ukubonisa ingqokelela kunye nokubamba isitya-ngaphandle kokongeza ubuninzi beebakaki. Ukuba ufuna ukufaka ngokukhawuleza ishelfu esigcina isixa esikhulu sobunzima, iibakaki ezingabonakaliyo ziyindlela yokuhamba.
(Ityala lemifanekiso: Ashley Poskin)
Ezi zibiyeli zaseshelfini zinokufumaneka kwaye ziyafumaneka ngokulula kwi-intanethi kunye noluhlu lobunzima besisindo ukusuka kwiipawundi ezingama-25 ukuya kwiipawundi ezili-100 kwizibiyeli ezizodwa, kunye neeseti ezingama-150 zewelda. Olunye uphononongo lwenza ukufakwa kubonakale ngathi kukuhamba ngekhekhe, kodwa zinzima kancinci ukuba awunakho ukufikelela kwisixhobo esinye ngokukodwa: umatshini wokuprinta. Ukuba awukwenzi oko, usenakho ukuxhoma ngempumelelo ishelufu edadayo, kodwa kufuneka ube kakhulu ngokuchanekileyo kwimilinganiselo yakho kunye nokubhola ukuze ube nemveliso egqityiweyo kwinqanaba.
Bukela Uyakha Njani Ishelufu Yokudada
1 wood iinkuni zamafu (okanye ezijiyileyo), kuxhomekeke kububanzi kubakaki bakho
Izibiyeli zeshelfu edadayo
Isikwere somchweli okanye unxantathu
Umatshini wokushicilela (ngokuzithandela)
1. Kuqala, sika iinkuni kwishelufa yakho. Saqala nge-17.5-intshi isetyhula ibhodi yeprojekthi ukusuka eDepho yasekhaya (nantsi into efanayo ibhodi ejikelezayo kwiAmazon), emva koko wayicoca ngesiqingatha ukwenza isangqa.
Ingcebiso: Ukuba ufuna ishelufu yakho edadayo ukuba ijongeke ngokungathi iyadada kwaye ihleli ithe tyaba eludongeni, qwalasela isizili malunga nesiqingatha seyintshi ngaphandle komqolo weshelfu yakho apho ihambelana khona nezibiyeli. Iibakaki ezinokuhlengahlengiswa (ezinjengezo besizisebenzisa) zininzi kakhulu, kodwa unokufumana iibakaki ezimalunga ne-1/8 intshi ubukhulu.
Sebenzisa isixhobo sokufumana istudiyo ukufumana izitshixo eludongeni lwakho, emva koko ubeke ishelufu yakho eludongeni apho ufuna ixhonywe khona. Usebenzisa inqanaba, zoba umgca ophawula ukubekwa okuphezulu kweshelufu.
Sebenzisa umgca wepensile ozotywe njengesikhokelo, beka izibiyeli eludongeni, kwaye uphawule indawo yokugrumba imingxunya yeeankile. (Siphuculelwe ezi endaweni yokusebenzisa iiankile ezimdaka ezize neebrakethi. Ndikucebisa ukuba wenze okufanayo.) Uya kufuna ukubeka isibiyeli ngokulinganayo eludongeni ukuze usasaze ngokufanelekileyo ubunzima beshelufu.
Hlanganisa izibiyeli ezixhonyiweyo ngokwemikhombandlela kwiphakheji. Ndigcine inqanaba elincinci ngaphezulu kweebakaki zam ngexesha lofakelo, kwaye umyeni wam wabamba ishelufu engezantsi ukugcina yonke into inqanaba ngokusemandleni ethu.
Emva koko, beka ishelufu phantsi kweebakaki ezinyukayo. Fumana indawo ekumbindi webrakethi nganye kwaye wenze uphawu lwepensile ngaphezulu kweshelufu.
Krwela umgca osuka kuloo manqaku uye ngqo ngasemva eludongeni nasemazantsi eshalofini.
Ithetha ntoni i1212
Fumana indawo esecaleni kwicala elingasemva kweshelufu yakho (kwibhodi e-intshi e-1-intshi, iya kuba yi-intshi eyi-.5) kwaye uzobe umgca wokudlula kwindawo engumbindi. Beka i-drill bit yakho kwi-x apho imigca idibana khona, kwaye uqalise ukwehla kancinci kancinci. Kubalulekile ukuba uzame ukubhola ngokuthe ngqo emngxunyeni kangangoko kunokwenzeka, ke sebenzisa into enje ngesikhokelo se-drill, inqanaba, okanye i-engile yentsimbi ukugcina i-drill yakho iqonde ngqo kwaye isihla. Qiniseka ukuba ugoba phantsi ngokweziyalelwano oze nazo iibrakethi zakho. Abethu bathi kufuneka sombhe ubuncinci ii-intshi ze-4.5 ubunzulu. Ukuba unokufikelela kumatshini wokuprinta, sebenzisa oko ukuqinisekisa umngxunya ogqobhoziweyo ochanekileyo.
Ngononophelo beka ishelufu kwizibiyeli kwaye uhlengahlengise ukunyusa de babe kwinqanaba.
Nalu uluvo olusuka phezulu ukukunika umbono wesithuba somgama ukuba ukhetha ukungangqinelani indawo apho izibiyeli zidibanisa khona eludongeni. Ayisiyonto inkulu ukuba awuyenzi, kodwa iyabonakala kufutshane.
Ngoku hombisa ezo shelufu, kwaye wonwabele wonke umsebenzi wakho onzima!
Uyakha kanjani iishelufu zeenkuni ezide ezidadayo (ezingazukuSag embindini)
Ishelfu edadayo endithathe imizuzu emi-5 (kwaye akukho zixhobo) ukuyifaka
Iindlela ezili-11 ezikhuthazayo zokwenza isitayile kwiiShelfu zakho eziDadayo
U-Ashley wathengisa ngobomi obuzolileyo bedolophu encinci kwindlu enkulu ngenxa yesiphithiphithi seSixeko sase Windy. Ngalo naluphi na usuku olunikiweyo unokumfumana esebenza kwifoto ezizimeleyo okanye kwiibhlogi zeblogi, ephikisana nesithandwa sakhe esincinci, okanye ehamba noChuck umlo wamanqindi.
Sebenzisa iBozeze: Iindlela ezili-10 zokuCoca ngeVodka
Intengiso yasebusika ye-IKEA ibandakanya izinto nge-50% yeSaphulelo
Ukuphuculwa kombane wonke umntu ucela ngoku, ngokutsho kweenzuzo
Iindlela ezingama-51 zoKonakaliswa, Zolile, kwaye uzive ulilolo ngoku
Ithetha ntoni xa ubona i-1010
intsingiselo ye3: 33